DYSMANTLE: imwe post-apocalyptic zita | Linux Addicts
Isaac | 27/11/2021 18:18 | Linux Mitambo, chiutsi
Kana iwe uchida mazita ekupona, kunyanya ayo anobva pane post-apocalyptic nyaya, ipapo mutambo wevhidhiyo DYSMANTLE isarudzo huru kwauri. Iri zita richaburitswa reWindows, uye kunyangwe paine hurongwa hwekutanga hweMacOS neLinux, panguva ino, inogona kungoridzwa zvakakwana paLinux nekuda kweProton purojekiti (sekusimbiswa nevagadziri, vatora gwara idzva) .
Uyu mutambo wevhidhiyo wakagadzirwa ne10tons Ltd. uye zvinotarisirwa kuti ichakurumidza kuwana kuburitswa kuzere muzvitoro zvakaita se. Valve's GOG uye Steam. Iri izita rinovavarira kuve rakabudirira-yekutamba-yekuita uye zita rekuita munyika yakavhurika, mune zvese zviri matongo uye iwe unofanirwa kupona nekugadzira yako maturusi, zvombo, nezvimwe. Mukuwedzera, musoro wacho une unhu hukuru.
Kunyangwe musimboti yaive yakarongedzerwa kuivhura kuLinux zvakare natively, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ivo ichikwata chidiki kwazvo, vanhu vatatu chete. Vane basa rakawandisa uye saka zvinoita sekunge vachadonhedza Linux kuenderana mumaoko eProton uye nokudaro kukwanisa kuisa pfungwa pane zvimwe zvinhu. Haisi iyo yakanyanya kunaka, asi zvirinani iwe unogona kutamba ...
Kana iri DYSMANTLE, ichatanga munzvimbo yekugara mushure memakore. Nyika itsva yakakumirira, izere nezvisikwa zvinosemesa uye zvinovenga. Hapasisina vanhu vanoonekwa, uye zvino zvisikwa zvinotonga muguta rakaparadzwa. Iyo nyaya inotaridzika zvakanaka, uye izvo zvaizofanira wedzera maitiro akadai se:
Shandisa zvinhu kugadzira zvishandiso.
Iwe hauna miganhu munyika ino yakazaruka.
Irwa kana kutiza kuti urarame.
Ongorora nyika uye tsvaga zvakavanzika.
Tora nzvimbo sedzako nekubvisa kutyisidzira.
Gadzira zvombo, zvipfeko, uye zvimwe zvinhu zvinodiwa.
Kuvhima uye kubata hove.
Rima zvirimwa kuti uzvikohwe.
Gadzirisa mamwe matambudziko aunowana pasi pevhu kana mumakuva ekare.
Uye vhenekera zvakavanzika zvechitsuwa chinoshamisa chauri ...
Rangarira kuti DYSMANTLE yave kutosvika, uye ichauya nemutengo kubva ku $19,99, kusvika pana November 16 kana pasina kunonoka.
Tora zita DYSMANTLE - Chitoro cheStam
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » DYSMANTLE: imwe post-apocalyptic zita
58th edition yeTop500, chinzvimbo chemakomputa ane simba kwazvo pasi rose
AgStack Foundation: yakavhurika sosi uye ... zvekurima?